Torrent file ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို Download ​လုပ်​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Torrent file ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို Download ​လုပ်​မ​လဲ
​မိ​မိ ​ဒေါင်း​ချင်​တဲ့ torrent ​ဖိုင်​ကို ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ကို​သ​ဘော​ကျ​တဲ့ Downloader ​တစ်​ခု​ခု​နဲ့ ​ဒေါင်း​လိုက်​ပါ . ​ဒေါင်း​လိုက်​ရင် ​ရ​လာ​မှာ​က ​ကျွန်​တော်​တို့ ​လို​ချင်​တဲ့ ​ဖိုင်​မ​ဟုတ်​သေး​ပါ​ဘူး . ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး link ​တစ်​ခု​ပဲ ​ကျ​လာ​မှာ​ပါ . ​အဲ့​ဒီ့​ဖိုင်​ကို​မှ ​ကျွန်​တော်​တို့​က µTorrent ​ဆို​တဲ့ Downloader ​နဲ့ ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​ဒေါင်း​ရ​ပါ​တယ် . µTorrent ​နဲ့ ​ဘာ့​ကြောင့်​တင်​ရ​တာ​လဲ ၊ ​နောက်​တစ်​ခု​က ​ဘာ့​ကြောင့် ​သုံး​ကြ​တာ​လဲ​ဆို​ရင် µTorrent ​နဲ့​ဖိုင်​တင်​ရင် ​သူ့​မှာ ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင်​ထဲ​ကို ​ကို​ကြိုက်​သ​လောက် ​တင်​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​ဥ​ပ​မာ 1GB ​ရှိ​တဲ့​ဖိုင်​ကို ​တစ်​ခြား​ဆိုက်​တွေ​မှာ ​တင်​မယ်​ဆို​ရင် 100 MB (or) 200 MB ​ဒီ​လောက်​အ​ထိ​ပဲ ​အ​တင်​ခံ​ပါ​တယ် . ​များ​ရင် ​ခွဲ​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေါ့ . Torrent ​အ​နေ​နဲ့​တင်​မယ်​ဆို​ရင် ​တစ်​ဖိုင်​တည်း​ကို​ပဲ 1GB ​ဆို​လဲ ​သူ​က ​လက်​ခံ​တာ​ပဲ .. ​ကဲ ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ​ဦး . ​အင်​တာ​နက်​မှာ Torrent ​နဲ့​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​က​တော့ ​အ​များ​ကြီး​ပါ​ပဲ . ​တစ်​ခြား​လင့်​တွေ​သာ ​တင်​ထား​တာ ​မ​တွေ့​ရ​မယ် torrent ​က​တော့ ​အ​တော်​များ​ပါ​တယ် . http://www.utorrent.com/ ​က​နေ ​နောက်​ဆုံး​ထွက်​တဲ့ version ​ကို ​ဒေါင်း​လိုက်​ပါ . ​သူ​က Free ​ပါ ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​စ​ရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး . ​အ​ပေါ်​က ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ဒေါင်း​လိုက်​လို့​ရ​လာ​တဲ့​ဖိုင်​ကို ​ကျွန်​တော်​တို့​က Double click ​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​သူ​က µTorrent ​နဲ့ ​တစ်​ခါ​တည်း​ကို ​ဒေါင်း​တယ် . Torrent ​နဲ့​တင်​ထား​တဲ့​ဖိုင်​ကို µTorrent ​က​ပဲ ​ဒေါင်း​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​အ​ခု​ကျွန်​တော်​တို့ ​သုံး​နေ​တဲ့ Downloader ​နဲ့ ​အ​ဆင်​သိပ်​မ​ပြေ​နိုင်​ပါ​ဘူး . ​သ​ဘော​ပေါက်​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ် .
µTorrent ​တော့ ​မ​ဒေါင်း​ခင် ​တင်​ထား​ဖို့​လို​ပါ​တယ် . ​မ​ဟုတ်​ရင် ​ရ​လာ​တဲ့ ​ပ​ထ​မ​ဖိုင်​ကို Double click ​နှိပ်​ရင်​လဲ ​ဘာ​မှ​ထူး​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး
(၁) ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ကို​ဒေါင်း​ချင်​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို ​ကြိုက်​တဲ့ Downloader ​နဲ့​ဒေါင်း​ပါ . ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင် ​ကျ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
(၂) ​ရ​လာ​တဲ့​ဖိုင်​ဟာ kb ​သာ​သာ​ပဲ ​ရှိ​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​ရ​လာ​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို Double click ​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
(၃) ​အ​ခု µTorrent ​ထဲ​ကို ​တစ်​ခါ​တည်း ​သူ​သွား​ပြီး ​အဲ့​ဒီ့ link ​ကို µTorrent ​က ​သိ​တာ​နဲ့ ​တစ်​ခါ​တည်း Download ​အ​လုပ်​ကို ​စ​လုပ်​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ်
​မီး​ပျက်​လဲ ​ကိ​စ္စ​မ​ရှိ​ပါ . ​ပြီး​တဲ့​နေ​ရာ​က​နေ ​ပြန်​ဒေါင်း​ပါ​လိမ့်​မယ် .
​သူ့​မှာ ​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ဘာ​ရှိ​လဲ​ဆို​ရင် . ​ကို​ဒေါင်း​မယ့် Torrent ​ဖိုင်​ရဲ့ speed ​ပါ​ပဲ . ​ဖိုင်​တိုင်း​ဖိုင်​တိုင်း​မှာ speed ​ချင်း ​မ​တူ​ပါ​ဘူး . speed ​နိမ့်​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို ​ဒေါင်း​ရင် ​ကြာ​မယ် . speed ​မြင့်​မြင့် ​ရှိ​တဲ့​ဖိုင်​ကို ​ဒေါင်း​ရင် ​မြန်​မယ် . ​ကို​သ​ဘော​ကျ​တဲ့ Link ​တိုင်း​မှာ speed ​တစ်​ခါ​တည်း ​ပါ​ပြီး​သား​ပါ . ​ပြီး​တော့ ​ရှိ​ပါ​သေး​တယ် . ​အ​ဓိ​က​က ​ကို​သ​တိ​ထား​ရ​မှာ​ပေါ့ . ​ကို့​အ​ရင် ​ဘယ်​နှစ်​ဦး​က ​ဒေါင်း​ထား​ပြီး​ပြီ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို ​လိုက်​ရှာ​ပြီး​တော့ ​အ​များ​ဆုံး ​ဒေါင်း​တဲ့ link ​ကို​ပဲ ​ဒေါင်း​ကြ​ပါ . ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် ​လူ​များ​များ​ဒေါင်း​တဲ့​လင့်​က​သာ ​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​မယ့်​အ​ပြင် virus ​ကို​လဲ ​စိတ်​ချ​ရ​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော်​တို့​က​သာ virus ​ပါ​ပါ ​မ​ပါ​ပါ ​စိတ်​မ​ဝင်​စား​ပေ​မယ့် . ​နိုင်​ငံ​ခြား​သား​တွေ​က​တော့ ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင်​ကို ​ဒေါင်း​မယ်​ဆို​ရင် ​သေ​ချာ​မှ ​ဒေါင်း​တာ​ပါ . ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် ​သူ​တို့​တွေ ​လူ​များ​များ ​ဒေါင်း​တဲ့​ဖိုင်​ဆို​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​တာ​ပေါ့ . ​တစ်​ချို့​ဖိုင်​တွေ​က ​ဒေါင်း​သာ​ဒေါင်း​တာ ​ဖိုင်​က ​တစ်​ဝက်​နဲ့ ​ပျက်​ကျ​တာ​နဲ့ ၊ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တာ​နဲ့​နဲ့ ​တွေ့​ရာ​လင့် ​တစ်​ခု​ကို ​ဒေါင်း​လိုက်​ပြီး​မှ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင် ​ပင်​ပန်း​ရ​ကြိုး​မ​နပ်​ပါ​ဘူး .
​ကျေး​ဇူး​ပဲ​ဗျို့ ​ဒီ​ဟာ​လေး​ကို​ဖတ်​ဖို့​စောင့်​နေ​တာ​ကြာ​ပြီ ​စီ​ဘောက်​မှာ​ကျွန်​တော်​အော်​ခဲ့​ဘူး​ပါ​တယ်။
Anonymous October 1, 2009 at 2:11 PM
​ဒီ​မြန်​မာ​ပြည်​မှာ ​တ​ကယ်​ရော ​စမ်း​ကြည့်​ပြီး​ရဲ့​လား။
Unknown October 3, 2009 at 12:54 AM
Torrent ​က ​ဒေါင်း​လုပ် ​မ​လုပ်​ဘူး​ဗျ
proxy ​ထည့်​ဖို့ ​လို​တာ​လား။
(​လို​တယ်​ဆို​ရင် ​ဘယ်​လောက်​ထည့်​ရ​မယ် ​ဆို​တာ​လေး ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦး)
​ကျွန်​တော်​တို့ ​လက်​ရှိ ​သုံး​နေ​တဲ့ ​မြန်​မာ proxy ​နဲ့ ​မ​ရ​ဘူး​ဗျ
proxy ​မ​ထည့်​တော့​လဲ ​အ​လုပ်​မ​လုပ်​ဘူး​ဗျ
Torrent ​နဲ့ ​ဒေါင်း​စ​ရာ​တွေ ​အ​များ​ကြီး​မို့​ပါ​ဗျာ
​နောက်​တစ်​ခု ​တစ်​ဆက်​တည်း ​မေး​ကြည့်​ချင်​ပါ​တယ်
http://www.kavkiskey.com ​ဆိုက်​က ​လစ်​သွား​ပြီ​လား
​ကျွန်​တော်​တို့ kav7-cm-.......... ​ကီး​တွေ​က ​အဲ​သည်​က ​ယူ​နေ​ရ​လို့​ပါ
minmin December 26, 2009 at 9:33 AM
gwado October 12, 2011 at 4:03 AM